Waraysi kooban Sheekh Bashiir Shiil | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Blogga Muhaditha WordPress ayaa weraysi kooban la yeeshay Sheekh Bashiir Shiil taariikhdu markay ahayd 03.03.2013, waxuuna Sheekhu ku sugnaa markaa magaalada Odense ee dalka Denmark. Isagoo markaa u yimid inuu ka qaybqaato Mu’tamar ka dhaca wadankaas sanad welba bisha February. Hadaba Mu’tamarkii markuu dhamaaday ayuu sheekhu hadana u qabtay dhalinyarada joogta Magaalada Odense iyo nawaaxigeeda Dowra soconaysay sadex cisho oo ku saabsan “Musdhalaxul Xadiith”. Sheekhu waxuu akhriyay oo ardayda u dhameeyay kitaab yar oo uu qoray “Sheekh Ibnu Cuthaymin” oo ku saabsan Musdhalaxa. Hadaba maalinkii ogu danbaysay Dawrada ayaanu isku daynay bal inaanu sheekha weydiino su’aala dhawr ah . Kuwaas oo isugu jira taariikhda sheekha iyo su’aalo kale.
Su’aalaha waxaa kamid ahaa:
– Sheekh Meeshuu ku dhashay, taariikhduu dhashay ,magaciisa sadexan iwm?
– Barashadiisa cilmiga
– Culimaduu la kulmay, ama ka qaatay cilmiga ama ka helay ijaazooyinka.
– Maxaad kula talin lahayd dhalinta doonaysa inay bartaan cilmul xadiithka?
– Muxadithiin ma jiraan casrigan?
– Al jarx wa tacdiil casrigan majiraa, maxaadse ku odhan lahayd dadka culimada jarxinaya?
– Tadhciifinta iyo tasxiixintu haday is khilaafaan?
– Kutub aad qortay ma jirtaa?
Sheekha Ilaah (Subxaanahu watacaalaa) ha xifido runtii aad buu u dhibsaday inaanu weydiino taariikhdiisa isagoo markaa is xaqiraya odhanayana “aniga turjuma hayga qoranina” . Mutawaadhic awgeedna noogu diiday inaanu sii baadh baadhno. Balse waxuu noo sheegay in la yidhaahdo ” Bashiir Yuusuf Shiil”
Sida caadada ah culimada cilmiga barata waxay ku bilaabaan inay Kitaabka Qur’aanka bartaan kadibna culuumta kale. Sheekhu waxuu diinta ku bartay dalka soomaliya gudahiisa iyo banaankiisaba. Culimaduu ka qaatay cilmiga qaarkood
Sheekh Boqol soon (Calayhi raxmatullaah)<< Waxuuna ka qaatay kutub badan sida: Umuhaatu sittah, Minhaajka, Riyaadu Saalixiin, Buluuqul maraam iwm.
Sheekh Cabduraxmaan sheekh la yidhaahna waxuu ka qaatay<< Sunanu Nisaa’i
Sheekh Muxamed Macalin<< Tafsiirka Qur’aanka
Sheekh Muxamed Shukri<< Tafsiirka Qur’aanka
Sheekh Nuur Qawwi Culimaduu ka helay Ijaazooyinkuu:
Sheekh Muxamed As-soomaal (calayhi raxmatullah) waxuu ka qaatay Ijaazo ah “Alxadiith almusalsal bil awalliyah” iyo ” Kutubu sittah”. Waxaa kale oo uu ijaazo ka helay laba caalim oo kala ah:
Sheekh Yaxya Ibnu Xusayn
Sheekh Cabdul Wakiil.
Culimaduu la kulmay
Sheekhu waxuu noo sheegay inuu la kulmay oo weliba guryahooda ogu tagay culimada kala ah:
– Imaam Naasiru diin Albaani
– Cabdulqaadir Arnaa’uud Sheekh, Maxaad kula talin lahayd dhalinta doonaysa inay bartaan cilmul xadiithka?
-Waxaan dhihi lahaa waa in lala yimaado juhdi/dadaal badan
– Waa in la akhriyo isdhilaaxaatka culimada
– Waa in la akhriyo taraajumta culimada , sii aad ukala saarto culimada isu magaca eg.
– Waa in waxuu bartay ku sameeyo shaqo galin ama tababar sidoo kalena istijaabiyo. Tusaale: inuu xadiith takhriijiyo. Sheekha waxaan weydiinay ” kawaran haduu qofku axaadiista dhaciifka ama mawdhuuca ah intuu kutubta kasoo eego kadibna umadda oga digo”?
Waxuuna sheekhu ku jawaabay waa arin wanaagsan , waana loo baahanyahay in umadda looga digo axadiistaas.
Sheekh ,Muxadithiin ma jiraan casrigan nool?
Haa way jiraan, lama odhan karo way dabar go’een. Casri welba way jiraan Muxadithiin. Kuwa hadda nool waxaa kamid ah:
– Sheekh Al Muxadith Abii Isxaaq Alxuweyni
– Sheekh Mash-huur Xassan
– Sheekh Cali Xalabi iwm.
Sheekh, Al jarx wa tacdiil casrigan majiraa, maxaadse ku odhan lahayd dadka culimada jarxinaya? Sida Sheekh Abii Isxaaq Alxuweyni oo kale inay dhahaan waa mubtadic iwm?
Aljarx Wa tacdiil kutubtuu ku yaalaa waxa hadda socdana mahan jarx wa tacdiil. Waa khalad in culimada la durro. Madrasada la yidhaah ” al jarx wa tacdiil” ee casrigan jirta ee kolba sheekh lagu tabdiicinayo sheekhi bilaabay laftiisii ayay dib ogu soo laabatay oo isagii ayayba kaga bilaabeen inay tuuraan.
Arinta Sheekh Abii Isxaaq-na waxaan leeyahay mahan mubtadic. Waxaa la ii sheegayay in Sheekh Mash-huur Xassan (anu ma arag ee) uu aad u amaanay , cajalkaasna waxuu ku jiraa ayaa la yidhi internetka.
Sheekha waxaan weeydiinay ” Kawaran sheekh hadii hal xadiith ay culimana dhahaan waa saxiix kuwana waa dhaciif maxaan samaynaynaa”?
Hadii ay culimadu isku khilaafaan xadiith oo qaarna dhahaan waa saxiix qaarna waa dhaciif ,agtadana tarjiix aadan ka samayn karin waxaa mar welba aanu ictimaadnaa qawlka culimada Mutaqadimiinta.
Kutubtiisa & Rasaa’ishiisa
Sheekhu waxuu noo sheegay inay jiraan kutub/rasaa’il uu qoray weliba waxuu noo sheegay kitaab kiis ah oo daabacan, inkastoo nasiib darro uusan wadin hal nuskha , balse waxuu noo ballan qaaday inuu noo soo diri doono maadama aanan internetka ka heli karin kitaabka sidoo kalena oolin maktabada magaalada.
Kitaabkaasna waxaa weeye buu yidhi kitaab uu qoray Imaam Abuu Xaamid Alqazaali oo uu ogu tala galay ardayda ayaan anna ku sameeyay takhriij axaadiista kitaabkaas. ( Nasiib darro kitaab magaciisa maanan qoran, balse markan soo helo ayaan in sha Allah maqaalkan Edit ku samayn doonaa).
Sheekhu waxuu degan yahay dalka Canada , halkaas oo uu ku bixiyo duruus muxaadaraat iwm. Waxaa internetka laga heli karaa Cajaladaha uu duubay kuwaas oo isugu jira Maqal iyo muuqaal.
– Sheekhu waxuu Reer Denmark u qabtay Sadex dawro Kuwaas oo kala dhacay sanadkii hore ee 2012 iyo sanadkan 2013. Waxayna kala ahaayeen dawrooyinku:
1) Nukhbatul Fikri lii sheekh Ibnu Xajar<< Lama duubin 2) Adraaful Xadiith<< Way duubantahay 3) Musdhalaxul Xadiith li sheekh Ibnu Cutheymiin<< Way duuban tahay
Sidaan kor ku sheegnayba sheekhu muusan nooga jawaabin meesha uu ku dhashay , goortuu dhashay iwm. Arintaasna waxaan u aragnaa inay ka tahay mutawaadhuc-nimo ,waana runtii wax in lagu amaano mudan. Ilaah (subxanaahu watacaalaa) waxaan ka baryayaa inuu miizaankiisa xasanaatka u saaro dadaalka iyo dacwada uu diinta Islaamka kawado. Sidoo kale inuu khaatumo wanaagsan ku dilo maalinka qiyaamana la soo saaro anaga iyo sagaba Nabiga calayhi salaatu wasalaam
Waxaan saxnay waa Fadhliga Ilaah (subxaanahu watacaala) waxaanu khaladnayna waa nafteena, faraheena iyo shaydaan.
Wallaahu tacaalaa aclaa wa axkam.
WQ: Muhaditha WordPress & Khadra Cabdullaahi Ducaale. Like this:Like Loading...
from → Taariikhda Culimada Soomalida, Waraysi-- Sheekh Bashiir Shiil
← Qaamuska Muxadithinta -Hordhac
Taariikhda Ibnul Qayyim Aljawziyyah →